သကျတနျ့ခြို: August 2011
Posted by သက်တန့်ချို at 10:50 AM 14 comments:
August 31 တွင်ကျရောက်သော Blog Day အားလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏ ။ ဘလော့တွေမှာ ဘလော့ဒေး အကြောင်းရေးနေတာတွေ့တော့ စိတ်ဝင်တစားနဲ့လိုက်ဖတ်မိပါတယ် ။ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ လက်စာတော့ မိမှာပဲ လို့ တွေးရင်း ဟီးး နောက်ဆုံး အစ်မ အိန်ဂျယ်ရဲ့ လက်စာ တဂ်တာ မိသွားပါတယ် ။ ဘလော့တွေ ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ ဘလော့ဒေးအကြောင်းကို ဘလော့တော်တော်များများမှာ ရေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ထပ် မရေးတော့ပါဘူး ။
ကျွန်တော့်ဘလော့လေးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ ဘလော့စပေါ့မှာ ဒိုမိန်းအခွံအုပ်တဲ့အကြောင်းလေးရေးချင်ပါတယ် ။ အင်တာ နက်စသုံးခါစကပေါ့ အဲဒီတုန်းက Ning ဆိုက်တွေက ဖရီးပေးတယ် ။ လူတိုင်း Ning ဆိုက်တွေ ထောင်ကျတာပျော်စရာကြီးပါပဲ ။ ကျွန်တော်ကလည်း ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်ဆိုတော့ Ning ဆိုက်လေး တစ်ခုထောင် ထားတယ်။ အခုတော့မရှိတော့ပါဘူး ။ ဘလော့ကိုရူးသွပ်သွားတာကတော့ အဲဒီလိုကိုယ် ပိုင်ဘလော့လေးတွေလုပ်လို့ရရတယ်ဆိုတာ ပြောပြတာကတော့အစ်မ ဆောင်းပြာသိုပါ ။ သူ့ဆိုက်က www.soungpyartho.wordpress.com ပါ ။ ကျွန်တော်လည်း ဝေါပရပ်မှာ လုပ်တာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် မကြိုက်ဘူး ဗျ ဘယ်လိုကြီးမှန်းကိုမသိဘူး ရှုပ်နေသလိုခံစားရတယ် အပြည့်အ၀ Customize လုပ်လို့မရဘူး ဒီတော့ Multiply ရောက်သွားတယ် ။ အဲဒီမှာလည်းကဗျာလေးတွေရေးလိုက် စာလေးတွေရေးလိုက်နဲ့ လူက အတည် တကျကိုမဖြစ်သေးဘူး ။
အော် မေ့နေလို့ ပြောဦးမယ် သက်တန့်ချို နာမည်က ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတာ ။ လူက ကြည့်တော့ ကျား ကျားယားယားကြီး နာမည်လေးက သက်တန့်ချိုတဲ့ အရင်က မေလ်း မှာ ကောင်လေးတွေ က အပ်ပြီး မမ သက်တန့် ဘာညာနဲ့ လာကြူကြသေးတယ် ။ မနည်းရှင်းရတယ် ။ နာ ယောင်္ကျား အစစ်ကြီးပါ ကွာဆိုပြီး ။ အဲဒီနာမည်ရ လာပုံလေးကဒီလိုပါ ။ ကျွန်တော်ဆေးကုမ္မဏီအတွက် ပထမဆုံး ပန်းနာရင်ကြပ်ဆောင်း ပါးလေးရေးပေး ဖူးတယ် ။ အဲဒီမှာ ဆရာဝန်ဟောက်ဆာဂျင်ကောင်လေးနဲ့ လူနာမလေး ဇတ်လမ်းပေါ့ ။ ပထမဆုံးရေးတဲ့ ၀ထ္ထုတိုလေးမှာ ပြီးတော့ ဂျာနယ်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ လည်းထည့်မှာဆိုတော့ မင်းသမီးနာ မည်ကို လှလှလေးပေးမယ်ပေါ့နော် ။ ပြီးတော့ သက်တန့်ချိုဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုစဉ်းစားမိသွားတယ် ။ ဒါနဲ့ ကောင်လေး က ဒေါက်တာနိုင်ဇော် ကောင်မလေးက သက်တန့်ချိုဆိုပြီး ရေးထည့်လိုက်တယ် ။ ဟီးးး နောက် ပိုင်း blogspot မှာ ဘလော့လုပ်မယ်ဆိုပြီးရှာတွေ့သွားတော့ သက်တန့်ချို ဆိုတဲ့နာမည်လေးပဲ ဆက်သုံး ဖြစ်သွားတာပါ ။ ဘာရယ်ကြောင့်ကြီးရယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ့်နာမည်အရင်းကြီးနဲ့ဆို ဘူမှ စာလာ ဖတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ ဟီးးးး။ (ပိုင်တယ်နော် :P)
ဒါနဲ့ပဲ သက်တန့်ချို ဆိုပြီးဘလော့လေးတစ်ခု ပေါ်လာခဲ့တယ် ။ ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ် ။ အဲဒီ သက်တန့် ချိုဆိုတဲ့နာမည်လေး အသက်ဆက်နိုင်အောင် ကွန်းမန့်တွေ ပေးခဲ့ကြတဲ့ လာလည်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေ အခုထိတောင် မှတ်မိနေသေးတယ် ။ ပထမဆုံးဘလော့ကို လာလည်သူကတော့ အစ်မ အဖြူရောင်နတ် သမီးပေါ့ ။ ဘလော့ ကို အမြဲလာရောက်အားပေးပြီး ကွန်းမန့်တွေ ရေးပေးခဲ့တယ် ။ အစ်မ အိန်ဂျယ်ရဲ့ ဆိုက်ပရပ်က ဗဟုသုတတွေနဲ့ ကဗျာတွေ နောက်ပြီး ဘာပို့စ်ပဲ တင်တင် ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ညှပ်ပြီးတင်တယ် ။ စာတွေကလည်း အဖြစ်သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲ သေသေချာချာကို အရှည်ကြီးတွေနဲ့ ဗဟုသုတရအောင်ရေး ထားတော့ အမြဲပဲ ၀င်ဝင် ဖတ်တဲ့ ဘလော့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ ကိုမိုးလှိုင်ည ကျွန်တော့်ဘလော့မှာ ထည့်ထားတဲ့ငါးကန်လေးက ငါးလေးတွေကို နေ့တိုင်းအစာလာကျွေးတယ် အဲဒီတုန်းက ။ အခုတော့ flash တွေက လေးလို့ ဖြုတ်ထားတာ ။ ပြီးတော့ ဆက်ပြီးခင်မင်သွားသူကတော့အစ်မမေလေးပါ ။ သူ့ကဗျာတွေကို ကျွန်တော်က တအားကြိုက်တယ် ။ အဲဒီတုန်းက နာမည်ပြဿနာတွေ တူနေတဲ့ပြဿနာတွေ အတော်များတယ် ။ အစ်မမေလေး နာမည်တူ တဲ့ပြဿနာကို ၀င်ရှင်းပေးဖူးတယ် ။ အစ်မလည်းအခုတော့ အလုပ်တွေပိနေလို့ ပိုစ်တွေပုံမှန်မတင်နိုင် ရှာတော့ ဘူး ။ အစ်မနိုင်းနိုင်းစနေ ကိုလည်း အရင် က ယောင်္ကျားလေး ပဲထင်နေတာ ။ ဟီးးသူ့စီဘောက်မှာ သွား စကားပြောရင်း မှ မိန်းကလေးမှန်းသိရတယ် ။အပြင်မှာ လည်းတွေ့ဖူးပြီး သဘောကောင်းတဲ့ တိုင်းရင်းသူ အစ်မ ကြီးတစ်ယောက်ပါ ။ တောင်ကြီးရောက်ရင် ၀င်လည်ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ထားတယ် ။ နောက်ပြီး တော့ စာအရမ်းရေး တာတော်တဲ့ ရန်ကုန်သား ၊ ကိုလူထွေး ၊ သူငယ်ချင်း မလေး နှင်းဟေမာ သူတို့နဲ့ ခင်မင်ခဲ့ရတယ် ။ သားကြီး ၊ ကိုဟန် နဲ့ တကွ ဆက်လက်ပြီး ခင်မင်ခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂါတွေအများကြီးပါပဲ ။
ဘလော့တွေကို အချိန်ပေးမလည်နိုင်တဲ့အတွက် တခြားဘလော့ဂါတွေလိုတော့ အသိမိတ်တွေအများ ကြီးမရှိခဲ့ ပါဘူး ။ အစ်မ ပန်ဒိုရာ ရဲ့ဘလော့က ကဗျာတွေကိုလည်းရင်းနှီးခဲ့ပြီး ၀က်ဝံလေး နဲ့ ကိုစိုင်းတို့ကိုလည်း အစ်မနိုင်း စီဘောက် ကတဆင့်ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့တယ် ။ ဒဏ္ဍာရီ ( အစ်မရှင်မွှေးကြူ ) ကို လည်းသူ့ဘလော့လေး က စိတ်ဝင်တစားမို့သွားဖတ်ရင်း ရင်းနှီးခဲ့ရတယ် ။ နှင်းနဲ့မာယာ ၊ မိုးငွေ့ ၊ ခြင် ၊ ကလေးငယ်လေး ၊ ကျွန်တော်အခက်အခဲကြုံလို့ အကူအညီတောင်းတိုင်း မမောမပန်းကူညီပေးတတ်တဲ့ စင်ကာပူက ဘော်ဒါကြီး ပူးတေ တို့ ကိုလည်း အတိုင်းမသိခင်မင်ခဲ့ရပါတယ် ။ မန္တလေးသားလေး ကိုကိုးအိမ် ( သူက မန္တလေး သား နော် ဒါပေမယ့် ဘီယာမသောက်တတ်ဘူး ဆေးလိပ်မသောက်ဘူး အရမ်းရိုးတယ် အဲဒါကိုယ်တွေ့ ) ၊ ကျွန်တော့် ကို ထမင်းကျွေးဖူးတဲ့ ဆရာမရွှေစင်ဦး ( ဟီးးနောက်လည်းကျွေးပါဦး ) ကျွန်တော့် ဆွေမျိုးသား ချင်းတွေလို ခင်မင်ခဲ့ရတယ် ။ ကျွန်တော့်ဘလော့လေးမှာ အမြဲပဲကွန်းမန့်တွေလာလာရေးပေးကြတဲ့ ကိုကိုမောင် (ပန်းရနံ့) ၊ ဆွေလေးမွန် ၊ မိုးယံ စတဲ့ဘလော့ရေးသူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးအမြဲတင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ကတော့ ဘလော့ကို ပိုးဝင်သွားပြီထင်တာပါပဲ ။ သေတဲ့အထိရေးဖြစ်မယ်ထင်တယ် ။ ရောက်တဲ့နေ ရာ ကနေပြီးတော့ ဟီး ။ အခု အပြင်က ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းတွေ (Health For All Magazine , Living life Journal , Health Care Journal , Sarana ) မှာ သက်တန့်ချို (ဆေး ၂) နာမည်နဲ့ရေးနေတယ် ။ ဒါပေ မယ့် ။ ဒါအမှန် အတိုင်းဝန်ခံတာပါ ။
ထူးဆန်းထွေလာတွေရေးတာချင်းလိုင်းတူတဲ့ မိတ်ဆွေကြီး ကိုပီတာ ၊ အမြဲလာရောက်အားပေးတဲ့ ညီမလေး အိန်ဂျယ်လှိုင်း ညီလေးအလင်းသစ် ၊ ဆောင်းနှင်းရွက်တို့ကိုလည်း ကျွန်တော့် ရင်ထဲအမြဲအမှတ်ရနေမှာပါ ။ တရား စာပေတွေတွေကို ဖတ်ရှုခွင့်ရတဲ့ တောက်ပကြယ်စင် ဘလော့ ၊ ပန်းကမ္ဘာဘုန်းဘုန်း အစရှိသူတို့ ကိုလည်း လေးစား ဦးညွှတ်မိပါ၏ ။ စာအရေးအသားအရမ်းကောင်းတဲ့ ကိုမြစ်ကျိုးအင်း ၊ ဟောက်ဆာ ဂျင်အပိုင်း ဆက်မှာ ရန်ဖြစ်ဖူးတဲ့ အစ်မငယ်နိုင် (ဟီးးး ငယ်ကျိုးငယ်နာတွေပြန်ဖော်နေတာ ) ၊ အစ်မ ၀ါဝါ ခိုင်မင်း ( အစ်မက နောင်ဘ၀ နတ်ပြည်ရောက်မှာ ကျိန်းသေတယ် ဟီးးကောင်းမှုတွေ အမြဲလုပ်နေတာ ) ၊ မ ခင်ဦးမေ ( စာအရေးအသားက သူများနဲ့မတူပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုံမျိုးမို့ ကျွန်တော်ကြိုက်တယ် စီဘောက်မှာစာရေးရင် kom :cool ဆိုပြီးရေးလေ့ရှိတယ် ) ၊ မေတ္တာဖြင့် အန်တီတင့် ဟီးး သူက ကွန်းမန့်တွေ မှာ အဲဒလိုထည့်ထည့်ရေးတယ် ၊ နောက်ပြီး အစ်မကြည်ကြည် (အခုတလောဘယ်ပျောက်နေတယ်မသိ ) thettantchocho@gmail.com အခိုးခံရတော့ မိတ်တွေတော်တော်များများ အားလုံးနီးပါးနဲ့အ ဆက်အ သွယ်ပြတ် သွားတယ် ။
သူငယ်ချင်းချစ်ကြည်အေး (ကဗျာတိုလေးတွေမိုက်တယ် ) ၊ ကိုအောင်ကျော်မင်း (ကျွန်းသား ) - ကျွန်တော့်ကို နာမည်ခေါ်ပါဆိုဘယ်တော့မှမခေါ်ဘူး ဒေါက်တာကြီးပဲလုပ်နေတယ် ဟိဟိ ၊ KP3 - ကျွန်တော် တစ်ခုခု လိုချင်ရင်အဲဒီမှာသွားသွားမွှေတယ် ၊ ကဗျာဆရာ မိုးစက်အိမ် ၊ ကဗျာဆရာမလေး မိုးအိပ်မက် ( ဧကရီဝင်း ) ၊ ဘလော့မှာ လူသိများတဲ့ ကိုဇော် ၊ အခုရက်ပိုင်းမှာ ရင်းနှီးလာခဲ့တဲ့ ကိုလင်းဦး ( စိတ်ပညာ) ၊ စာရေးဆရာမ မေသိမ့်သိမ့်ကျော် ( ဟီးး ခပ်တည်တည်ပဲရေးပစ်လိုက်ပြီ ) ၊ ချဉ်ပေါင်ခြံထဲ တကုပ်ကုပ်အလှုပ်ရှုပ်နေတတ်တဲ့ ကိုဘကြိုင်ကြီး (သူလည်း social network တွေနဲ့နဘမ်းလုံးနေရှာတယ် ) ၊ မမ ကိကိ ၊ သဒ္ဓါ့လှိုင်း ၊ ချိုကိုးသဇင် ၊ အိန်ဂျယ်ရှားပါး ( ဘလော့တွေ အရေးပါးတယ် သွားသတိပေးဦးမှ ) ၊ စားသောက်ဖွယ် ရာတွေနဲ့သရေကျအောင်အမြဲလုပ်တဲ့ အစ်မဂျာမုန်းဒါန် ၊ မကြာခင်ကမှ နတ်ပြည်မှာ နတ်သမီးလေး ငါးရာနဲ့ ပျော်မွှေ့သွားတဲ့ ဘဘကျောက် ( ပြောရင်းတောင် နိုချင်တယ် ခဏလေးပဲစောင့်ပါဗျာ လိုက်ခဲ့မယ် - ဟိဟိ အံမယ် ကိုယ်က နတ်ပြည်ရောက်မှာကျနေတာပဲ ဒီပုံမျိုးနဲ့ ) ။ မြန်မာပြည်ကနေ ပရုပ်ဆီတွေ ပျက်သွားတော့ စာရေးတာပါပျက်သွားတဲ့ အစ်မပန်းရင့် ( Ultrasurf သုံးနည်းသင်ပေးမယ်ပြောထားပြီးမှ သူနဲ့လည်းအဆက်ပြတ်သွားတယ် ) ကျွန်တော် အမြဲသတိတရရှိနေကြမယ့် ဘလော့ဂါတွေပါပဲ ။ ဒီထဲမှာ နာမည်မပါ တဲ့ ရောင်းရင်းကြီးများကျန်ခဲ့ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ကြပါကုန် ။ စဉ်းစားမိသလောက် ရေးရတာဆိုတော့ ဟီးး ကျန်ခဲ့ ရင်နားလည်ပေးကြပါ ။
ထပ်ပြီးပြောချင်တာကတော့ ဘလော့စပေါ့မှာ ဒိုမိန်းအခွံအုပ်တဲ့ကြောင်းပါ ။ blogspot ဆိုတာက Blogger ဟိုစတင်ကနေ ပေးတဲ့ ဖရီးရတဲ့ ဒိုမိန်းဆိုပါတော့ ။ သူ့ဘာသူ ဒီအတိုင်းသုံးလို့လည်းရသလို ။ ကိုယ့်ဘာသာ ဒိုမိန်းဝယ်ပြီးတော့ ( .com, .org, .net , .info ) စသဖြင့်လည်းချိတ်နိုင်ပါတယ် ။ ချိတ်တာကလည်း ကိုယ်ဝယ် ထားတဲ့ဒိုမိန်းကို ၀ယ်တဲ့ ဆိုက်မှာ Cname , NDS ချိတ်ပြီးတာနဲ့ ၂၄ နာရီစောင့်ရပါတယ် ။ Domain Redirection လို့ ခေါ် တာပေါ့ ။ Blogger မှာလည်း ၀ယ်လို့ရပါတယ် ။ ၂၄ နာရီစောင့်ပြီးရင်တော့ Setting ထဲက Publishing နေ ရာမှာ သွားချိတ်လို့ရပါပြီ ။
စာရေးသူနေရာကနေကြည့်ရင်တော့ ဘာမှမကွာပါဘူး ။ ဒီအတိုင်းပါပဲ ။ စာဖတ်သူနေရာကနေကြည့်ရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ ကနေ ဖတ်လို့ရပါပြီ ။ blogspot.com နဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဘာဆိုက်မှ မပွင့်ပါဘူး ။ ကျော်ကြည့် ရင်ကြည့် မကြည့်ရင် Reader ထဲကနေဖတ် ။ ဒိုမိန်းချိတ်လိုက်ရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံကနေပွင့်ပါပြီ ။ ဥပမာ နိုင်းနိုင်းစနေ ၊ ကိုပီတာ ၊ သက်တန့်ချို ၊ ရွှေစင်ဦး ၊ ကိုကိုးအိမ် ၊ မေသိမ့်သိမ့်ကျော် စတဲ့ ဘလော့တွေ ဘာမှကျော်စရာမလိုပဲ ပွင့်ပါတယ် ။ Background ပုံတွေကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ Ning တို့လို တခြား Image Hosting တစ်ခုခုမှာ သွားချိတ်ပြီးပြန်တင်ရင်တော့ ဘလော့ပုံလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်ရပါပြီ ။ ကျွန်တော့်ဘလော့ အဲဒီလို လုပ်ထားပါတယ် ။ စိတ်ပါဝင်စားသူများ စမ်းကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ ။ ဒိုမိန်းချိတ်တဲ့အခါမှာ ကျွမ်းကျင် တဲ့သူနဲ့ချိတ်ဖို့တော့အကြံပေးလိုပါတယ် ။
ဘလော့ရပ်ဝန်းကြီးဒီထက်မက တိုးတက်ပါစေ ဗျာ ။ စာရေးကောင်းသူများလည်း အစဉ်အမြဲပေါ်ထွက်လာပါစေ ။ ဘလော့ကို ရင်ထဲအသည်းထဲကကို ချစ်မြတ်နိုးသူများဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် ။ တဂ်ပေး တဲ့ အစ်မကြီး နတ်သမီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျား))
အားလုံးနီးပါးကလည်းတဂ်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ဆက်မတဂ်တော့ပါဘူး (နောက်မှ အချီကြီးတဂ်မယ် အကုန်လုံး ကို ဟိဟိ )
Posted by သက်တန့်ချို at 1:55 PM 12 comments:
အမျိုးသမီး မျိုးပွားအဂါင်္တွင် ဗက်တီးရီးယား ပိုးဝင်ရောဂါ
လက်ကမ်းစာစောင်လေးကို ဒီနေရာလေးမှာ Download ယူနိုင်ပါတယ် ။
ဗက်တီးရီးယား ပိုးဝင်ရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ ?
အမျိုးသမီးမျိုးပွားအဂါင်္တွင် ဗက်တီးရီးယား ကူးစက်ဝင်ရောက်ခံရသည့်ရောဂါဖြစ်သည် ။ သာမန်အားဖြင့် အမျိုး သ မီး မျိုးပွားအဂါင်္အတွင်းတွင် ဗက်တီးရီးယားပိုးအမျိုးအစားများစွာ တွေ့ရလေ့ရှိသည် ။ ၄င်းဗက်တီး ရီးယားပိုး များ၏ အချိုး အစားမညီမျှသောအခါ တစ်မျိုး သို့မဟုတ် တစ်မျိုးထက်ပိုသော အခြားဗက်တီး ရီးယားပိုးများ အလွန် လျှင်မြန်စွာ ပေါက်ပွားလာသည် ။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားသောအခါ အမျိုးသမီး မျိုးပွားအဂါင်္ အတွင်း ဗက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောဂါ ခံစားရပါသည် ။
မည်သည့် အမျိုးသမီးမဆိုဖြစ်နိုင်သည် ။ အဖြစ်အများဆုံးသော အမျိုးသမီး မျိုးပွားအဂါင်္ကူး စက်ဝင်ရော ဂါဖြစ် သည် ။ သင်သည်လည်း အောက်ပါအခြေအနေများတွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သည် ။
- သင်သည် အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်အတွင်းဖြစ်လျှင်
- သင့်တွင် လိင်ဆက်ဆံဖော်များပြားပြီး မကြာခဏ လိင်ဆက်ဆံတတ်သူ ၊ ဆက်ဆံဖော် အသစ်နှင့်ဆက်ဆံသူ
- သင့်တွင် သားဆက်ခြားရန်အတွက် သားအိမ်အတွင်းထည့်ရသည့် ပစ္စည်းကို ထည့်ထားသူဖြစ်လျှင်
သင့်ကို မည်ကဲ့သို့ ထိခိုက်စေသလဲ ?
ဗက်တီးရီးယား ပိုးဝင်ရောဂါကို မကုသခဲ့ပါက ဆိုးရွားသော ပြဿနာများ ခံစားရနိုင်သည် ။
- တင်ပါးဆုံရိုးကွင်း အတွင်းနာကျင်ခြင်း
- သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်း
- သန္ဓေသား၏ ပတ်လည်တွင်ရှိသော ရေမွှာအိတ်ရောင်ရမ်းခြင်း
- ၄၂ ပတ်မပြည့်မီ စော၍ ကလေးမွေးခြင်း ( လမစေ့ပဲ မွေးလျှင် ထိုကလေးသည် ကိုယ်အလေး ချိန် လျော့ နည်းပြီး အသက်ရှုလမ်းကြောင်းပြဿနာများ ခံစားရတတ်သည် ။ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု နှေးသည် )
- ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် သားအိမ်နံရံများ ရောင်ရမ်းတတ်သည် ။
သင်သည် သားသမီး ယူရန် စိတ်ကူးရှိလျှင်သင့်မှာ ဗက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောဂါ ရှိ ၊ မရှိ ပထမဦးစွာ စမ်းသပ်ဖို့ ဆရာဝန်အားပြောပါ ။ သို့မှသာ သင်နှင့်သင့်ကလေးအား ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည် ။
အမျိုးသမီးမျိုးပွားအဂါင်္၏ ကောင်းသော ကျန်းမာရေး
အမျိုးသမီး မျိုးပွားအဂါင်္အတွင်းကူးစက်ပိုးဝင်ရောက်မှုကို ကာကွယ်ရန် သင်လုပ်နိုင်သော အချက်များမှာ
- ကြမ်းတမ်းသော ဆပ်ပြာများ ၊ အမျိုးသမီးမျိုးပွားအဂါင်္အတွင်း ဖျန်းသည့်ဆေးများ ( Douches ) သုံးစွဲခြင်း များကို ရှောင်ပါ ။ ၄င်းတို့ကို သုံးလျှင် ပုံမှန်အတိုင်းရှိနေသော အချိုးအစားကို ပျက်ဆီးစေသည် ။
- သင် ၏ အစာဟောင်းအိမ် (စအို) အတွင်းမှ ဗက်တီးရီးယားပိုးများကို အမျိုးသမီး မျိုးပွားအဂါင်္အတွင်း သို့ ကူးစက် ပျံ့နှံ့မှုမဖြစ်ပါစေနှင့် ။ ဆေးကြောသန့်စင်ပါက ရှေ့မှနောက်သို့ သန့်စင်ပါ ။ အမျိုးသမီးမျိုးပွားအဂါင်္ မှ ဝေးရာသို့ သန့်စင်ပါ ။
- တင်း ကျပ် လွန်းသော အ၀တ်အစား သို့မဟုတ် ဂျင်းဘောင်းဘီ ၊ အ၀တ်အစားများကို ချည်ထည်မခံပဲ မ၀တ် ပါနှင့် ။ ဂျင်းအသားက ရေငွေ့ဓါတ်ကို စုပ်ယူပြီး ကူးစက်ပိုးများ ပွားများစေပါသည် ။
အဖြစ်များသော အမျိုးသမီးမျိုးပွားအဂါင်္ ပိုးဝင်ရောဂါများ
အောက်ဖက်မှာ အမျိုးသမီးမျိုးပွားအဂါင်္ဗက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောဂါ ( Bacterial Vaginosis) နှင့် ထရိုင်ကိုမိုးနပ်စ် ပိုးဝင်ရော ဂါ ( Trichomoniasis ) များဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်း ၊ ခံစားရသော ဝေဒနာများနှင့် လက္ခဏာ များကို ဖော်ပြထားပါသည် ။
ဖြစ်ရသောအကြောင်းအရင်း - အမျိုးသမီး မျိုးပွားအဂါင်္အတွင်း ဗက်တီးရီးယားပိုးများ အလွန်အ ကျွံပေါက်ဖွား မှုကြောင့်
ခံစားရသောဝေဒနာများ ( အကယ်၍ ဤဝေဒနာများအနက်မှ တစ်ခုခုခံစားရလျှင် သင်၏ ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ ။ ဆရာဝန် က မည်သည့်ရောဂါပိုးအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း သေချာစွာ သိရန် ၊ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများ လုပ်ရန် လိုကောင်း လိုပါလိမ့်မည် ။ )
- တစ်ခါတစ်ရံ မည်သည့်ဝေဒနာမျှ မခံစားရပါ ။ ။
- ခပ်ကျဲကျဲ နွားနို့အရောင် သို့မဟုတ် အရောင်မွဲမွဲ အရည်များ မိန်းမကိုယ်မှ ဆင်းမှုများလာသည် ။
- လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ပို၍ အနံ့ပြင်းလာသော ငါးညှီနံ့ ရတတ်သည် ။
ဖြစ်ရသောအကြောင်းအရင်း - ကပ်ပါးပိုးတစ်မျိုး အမျိုးသမီး မျိုးပွားအဂါင်္အတွင်းတွေ့ရှိရညခင်း (လိင်ဆက် ဆံခြင်း မှ တဆင့်ကူးစက်လေ့ရှိသည် ။ )
ခံစားရသောဝေဒနာများ ( အကယ်၍ ဤဝေဒနာများအနက်မှ တစ်ခုခုခံစားရလျှင် သင်၏ ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ ။ ဆရာ ၀န်က မည်သည့်ရောဂါပိုးအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း သေချာစွာ သိရန် ၊ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများ လုပ်ရန် လိုကောင်း လိုပါလိမ့်မည် ။ )
- စေးကပ်၍ ၀ါသလိုလို ၊ စိမ်းသလိုလို ခပ်မွဲမွဲ အရောင်ရှိသော အရည်များ ဆင်းတတ်သည် ။
- ဆိုးသော အနံ့ သို့မဟုတ် ငါးညှီနံ့ ရတတ်သည် ။
- ဆီးသွားစဉ် နာကျင်တတ်သည် ။
- မိန်းမကိုယ် ယားယံတတ်သည် ။
ဗက်တီးရီးယားပိုးဝင် ရောဂါ ကုသမှုအတွက် သင်၏ ဆရာဝန်အားပြောပြပါ ။ မည်သည့်ဆေးဝါးများက သင့်အတွက် သင့်တော်သလဲဆိုတာ မေးပါ ။
( အမျိုးသမီးမျိုးပွားအဂါင်္ ဗက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်းရောဂါသည် ။ လိင်ဆက်ဆံမှု များပြားသော အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်တတ်သည် ။ )
Ref : Health Education of Vaginal Infection
Posted by သက်တန့်ချို at 12:28 PM6comments:
လင်းကနဲ ရှင်းကနဲ မြင့်မားလာတတ်တဲ့
ရိုးသားပါမှ ... ကြိုးစားပါမှ
တချိန်... တို့အားလုံးရဲ့ မရဏ ပန်းတိုင်မှာ
ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ ၁၅၀၀ သဘောတရားမှာ
ရင်ခုန်ခြင်းကို ဘ၀ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ထိမ်းချုပ်လို့
အချစ်နဲ့ ဦးနှောက်ကို ညီမျှခြင်းချ
ပိုက်ဆံ .. ဂုဏ် .. ဓန နဲ့ ဒီဖျားယောင်းမှုတွေက
တာဝန် နှစ်ဆ ပိုယူရတဲ့
ဓမ္မ နဲ့ အဓမ္မ ကို အတူယှဉ်တွဲ
မော ဟ နဲ့ မာန်မာနကိုပယ်
ဒုက္ခနဲ့ သုခကို ညီအောင်ညှိလို့
ညီမလေးတစ်ယောက် လင်းလက်ပါစေ ...
Posted by သက်တန့်ချို at 12:22 PM6comments:
Labels: ကဗျာ, ညီမလေးဖတ်ဖို့
ဒါဟာလည်း ထူးထူးဆန်းဆန်း ရောဂါ အခြေအနေတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ရာတောင်မရှိပါဘူး ။ သူမနာ မည်က Ashleigh Morris ဖြစ်ပြီး ရေကို အလာ့ဂျစ်ဖြစ်တဲ့ Aquagenic Urticaria ဆိုတဲ့ရော ဂါတစ် မျိုးကို ခံစားနေရရှာတယ် ။ ဒီရောဂါဟာ သူမကို ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှ ရေနဲ့ထိခွင့်မရအောင် တားဆီး ထား တယ် ။ ဥပမာ ရေချိုးခြင်း ရေကူးခြင်း စသဖြင့်ပေါ့ ။ သူမဟာ ဘယ်လောက်ထိ လဲဆိုရင်သူမ ကိုယ်က ထွက်တဲ့ချွေး နဲ့ ပြန်ပြီး အလာ့ဂျစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အချိန်တိုင်း အနီကွက်တွေပေါ်နေလေ့ရှိတယ် ။ လူတွေ ရဲ့ခန္ဓာ ကိုယ် ဟာ ရေ ၈၀% နဲ့လုပ်ထားတာမှန်ပေမယ့်လည်းဒီကောင်မလေးက ဘာကြောင့် အလာ့ ဂျစ်ဖြစ် ရ တယ်ဆို တာတော့မသိပါဘူး ။ သူမ ဘယ်လိုရေချိုးသလဲဆိုတာလည်းမသိရပါဘူး ။
Posted by သက်တန့်ချို at 4:14 PM 10 comments:
Labels: ထူးဆန်းသောသတင်းများ, ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ, ဆေးပညာဖြစ်ရပ်ဆန်းများ
သူ့ကို တချို့ ရေခဲ လူသားလို့လည်းခေါ်ကြတယ် ။ သူက အေးစက်တဲ့ ရာသီဥတုမှာတောင် အေးစက်ခြင်းကို မခံစား ရပဲ ရေခဲတွေပေါ် ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ သူဖြစ်တယ် ။ နာမည်က Qim Hof aka ဖြစ်ပြီး ဒတ့်ခ်ျ လူမျိုး တစ်ယောက် ဖြစ်တယ် ။ သူဟာ ရေခဲပြင်တွေအောက်မှာ ရေကူးနိုင်တယ် ဘာအ၀တ် မှမ၀တ် ပဲ ရေ ခဲတောင်တွေပေါ်မှာ တက်နိုင်ပြီး အခုထိလည်း စံချိန်တင်ထားဆဲဖြစ်တယ် ။ သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုဖြေရှင်းဖို့ တိကျ တဲ့ explanation မရှိခဲ့ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် အံ့သြစရာကောင်းလွန်းလှပါတယ် ။ သင်ရော ဒီလို ကိုယ်လုံး တီးနဲ့ဆောင်း ရာသီမှာ သွားလာနိုင်ရဲ့လား ။
Posted by သက်တန့်ချို at 2:47 PM2comments:
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပါပဲ ။ အလွန်ကြီးမားတဲ့မြွေကြီးဟာ သူ့ရဲ့ ပါးစပ်ကို ဟလို သားကောင် ကိုမြိုဖို့ ကြံ စည်နေပါပြီ ။ သင် သားပိုက်ကောင်လိုအကောင်မျိုးကို ဒီလိုကြီးမားတဲ့မြွေကြီးက မျိုတာကိုမြင် ဖူးပါသ လား ။ ရှားရှားပါးပါးတွေ့ရခဲတာမို့ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ် ။ အသည်းငယ်တတ်ရင်တော့မကြည့်ကြပါနဲ့ အခုတလော အင်တာနက် မှာ ရှာတာ ဒီလို ထိတ်လန့်စရာတွေပဲတွေ့နေရတယ် ကိုယ်ကလည်းမတင်ရင်မနေနိုင်ဘူးကိုး ။ ပုံတွေ ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ သူ့အစာ ကိုယ့်အစာ ကိုယ့်စားကျက် သူ့စားကျက် သဘောတရားနောက်ပြီး သား ပိုက်ကောင် ကို နောက်ဆုံး တစ်ကောင်လုံး ၀ါးမြိုလိုက်ပုံတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 2:39 PM 10 comments:
Labels: ထူးဆန်းသောသတင်းများ, ထူးဆန်းသောသတ္တ၀ါများ, ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ
ပုလဲဟာ အသက်ရှင်နေတဲ့ အခွံပါတဲ့ ကမာကောင်လေးတွေရဲ့ တစ်ရှူးအနုသားလေးတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အမာ ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ကမာကောင်လေးတွေရဲ့ အခွံမာကဲ့သို့ပဲ အလွန်သေးငယ်တဲ့ crystalline ပုံစံလေးတွေ နဲ့ calcium carbonate နဲ့ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ အရစ်အခွေ အလွှာလေးတွေ နဲ့စုပေါင်း ထားခြင်းဖြစ်ပြီး တကယ့်ပုလဲဟာ နူးညံ့ချောမွတ်ပြီး လုံးဝန်းပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း တခြားပုံစံ ပုလဲတွေ လည်းရှိပါတယ် ။ တကယ့်အဖိုးတန်တဲ့သဘာဝ ပုလဲတွေ ဟာ ကျောက်သံပတ္တမြားတွေ ထက်ပိုပြီးအဖိုး တန်ပါ တယ် ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက အလှအပရေးရာအတွက် ဆင်မြန်းခဲ့ကြပြီး ပုလဲတွေရဲ့ တန်ဖိုး ဟာလည်းအချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ မြင့်သထက် မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ် ။
ပုလဲရိုင်းတွေဟာ တန်ဖိုးရှိသလောက် ရှားလည်းရှားပါးပါတယ် ။ သူတို့ကို သဘာဝပုလဲလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ် ။ ကမာကောင်တွေ ကနေ ပုလဲကို ထုတ်လုပ်ယုံသာမကပဲ သူတို့ရဲ့အခွံကိုအသုံးပြုပြီးလဲ ကနုမာ နဲပ တခြား ယောက် သွားကဲ့သို့ လူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ထုတ်လုပ်သုံးစွဲလာခဲ့ကြပါတယ် ။ တန်ဖိုး နည်း ပုလဲတုတွေကိုလည်း လက်ဝတ်ရတနာ အဖြစ်ဆင်မြန်းဖို့ထုတ်လုပ်လာကြပါတယ် ဒါပေမယ့် အရည် အသွေး ကတော့ ပုလဲအစစ်တွေနဲ့ မယှဉ်နိုင်လောက်အောင်ကွာခြားလွန်းလှပါတယ် ။ ပုလဲကို ကမာကောင်မွေး မြူ ခြင်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်လာကြသလို အလှအပရေးရာအတွက်သာမကပဲ ကျန်း မာရေး ရှူထောင့် အနေနဲ့ပါ အမျိုးမျိုးအသုံးပြုလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။ Gracian gemologist တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Pliny က သူ့ရဲ့ ထင်ပေါ်ကျော်ကြား တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ Natural History that those two pearl were worth an estimated 60 million sesterces ဆို့စာအုပ်ထဲက ပုလဲနှစ်လုံးဟာဆိုရင် ယနေ့ပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင် 28 million dollars တောင်တန်ပါသတဲ့ ။ ကဲ ဒါဆိုရင် ပုလဲရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ် အကျိုးပြုတဲ့အချက်တွေကို ဆက် လက်လေ့ လာကြည့်ရအောင် ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကတည်းက တရုတ်ပြည်က မိသားစုတွေဟဟာ ပုလဲကို ကျန်းမာရေး အလှအ ပရေးရာ အသက်ရှည်စေဖို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ် ။ အေဒီ ၆၂၅ မှ ၇၀၅ အတွင်း တရုတ် အင်ပါယာ ကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ (တစ်ဦးတည်းသော အမျိုးသမီး ) Wu Ze Tian ဟာ ပုလဲ အမှုန့်ကို ပုံမှန်သုံးခဲ့ ပါတယ် ဒါ့အပြင်ပုလဲပါဝင်တဲ့ ခရင်မ်တွေကိုလည်း အရေပြားမှာ အမြဲလိမ်းချယ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူမအသက် ၆၅ နှစ် အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ သူမရဲ့ အရေပြားဟဟာ ငယ်ရွယ်စဉ်ကကဲ့သို့ တောက်ပြောင်ဝင်းလက်နေတုန်းပါပဲ ။ သူမရဲ့ အလှဟာလည်း တရုတ်ရိုးရာ ဒဏ္ဍာရီတွေမှာ ပြောစမှတ်တွင်ခဲ့ရပါတယ် ။ အန္ဒိယမှ ရှေးဟောင်းပညာရှင် Ayurvedic ဟာလည်း ပုလဲမှုန့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ်အကျိုးရှိမှုတွေကို အကျယ်တ ၀င့်စာရေး သားဖော်ပြဖူး ပါတယ် ။ Archaeologists တွေဟာ လူ့ရဲ့သွားကို ပုလဲ ဖြည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် သာမန် သွားအစစ် နဲ့ ယှဉ်လို့ရအောင်တူညီတယ်ဆိုတာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ် ။
ပုလဲမှုန့် ( Pearl Powder ) ၏ အကျိုးများ
ခေတ်ပေါ် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက သဘာဝ ဖြည့်စွက် အရာတွေဟာ သင့်ရဲ့ သက်တမ်းကို သင်ထင် ထားတာ ထက်ပိုပြီး နုပျိုစေတယ်ဆိုတာကို အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ် ။ လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေအရ ပုလဲအမှုန့်ဟာ လူ့ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအား Immune ကို တက်စေပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ပုလဲအမှုန့်ဟာ
- အသက်ရှည်စေပြီး ကျန်းမာတဲ့ဘ၀ကိုရစေပါတယ်
- အရေအကြောင်းတွေတွန့်ခြင်းနဲ့ အိုမင်းရင့်ရော်လာမှု နဲ့နေလောင်ကွက်တွေကို လျော့နည်းစေပြီး အရေး အကြောင်းထင်စေမှုမှ ကင်းဝေးစေပါတယ် ။ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ပုံစံကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပြီး အရေပြားဆဲလ်အသစ်တွေ ရရှိအောင် ကြီးထွာ်းအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ကိုလာဂျင်တွေကိုလည်း အသစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားစေပြီး အရေပြား ကိုထိခိုက်စေတဲ့ skin-damaging free radicals တွေကိုလျော့နည်းစေပါတယ် ။
- အရိုးတွေကို ပိုမိုသန်မာလာစေပြီးတော့ အရိုးအသစ်တွေကြီးထွားအောင် လှုံဆော်ပေးပြီး အရိုးရဲ့ သိပ်သည်း ဆကိုများစေပါတယ် ။
- နှလုံးကို သန်မာစေပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းကို ပုံမှန်ဖြစ်စေပါတယ် ။ နှလုံးရာဂါတွေကနေ ပြန်လည်ကောင်း မွန်လာစေ ပါတယ် ။
- သွေးပေါင်ချိန် Blood pressure ကိုပုံမှန်ဖြစ်စေပါတယ် ။
- မှတ်ဥာဏ်ကိုပိုပြီးကောင်းလာစေပါတယ် ။
- ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြင့်တက်စေပါတယ် ။
- ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောစနစ်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျော့ချပေးပြီး နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေပါတယ် ။
- ကလေးတွေရဲ့ ဥာဏ်စွမ်းရည် IQ ကို တိုးတက်စေပြီး ကျောင်းစာနဲ့ တခြားကျန်း မာရေးတွေ မှာ ကောင်း မွန်စေပါတယ် ။
- အသက်အရွယ်အိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို တိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ SOD လို့ခေါ်တဲ့ Superoxide Dismutase ကိုများစေ ပါတယ် ။ SOD ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။
- အများစွာသော ပရိုတိန်းတွေ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေနဲ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေနဲ့ polysaccharides တွေ ကို ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုစေဖို့ maintanance
ပုလဲဟာ အရေပြားပေါ်မှာ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးစေပါတယ် ။ အမျိုးသ မီးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့အလှအပနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ တရုတ်ပညာရှင်တွေက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ခန့်က တည်းက မျက်နှာမှာ ပုလဲ မှုန့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ပုလဲမှုန့်ရဲ့ ဖော်မြူလာ ကတော့ မျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆရာဝန်တွေမှ တဆင့်ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယ် ။ ပုလဲ တစ်ခုတည်းမှာသာလျှင် သဘာဝ ပစ္စည်းတွေ နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေ ညီမျှစွာ ပေါင်းစပ်ထားပြီး အရေပြားပေါ် လိမ်းတဲ့အ ခါ ချောမွေ့စေ ခြင်း ပျော့ပြောင်းစေခြင်းနဲ့ ၀င်းစိုစေခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ် ။ Melanin ရောင်ခြယ်တွေ ပွားများလာစေ ခြင်း ကို လျော့နည်းစေခြင်းအားဖြင့် ပုလဲ ပေါင်ဒါဟာ အရေပြားအရောင်ကိုထိမ်းညှိပေးပါတယ် ။ ပုလဲ အမှုန့်ဟာ အရေပြား ကိုသန့်စင်ချောမွတ်စေယုံသာမက တောက်ပ ၀င်းလက်စေပါတယ် ။ နေရောင်ခြည်ဒါဏ်ကို ကာ ကွယ်ပေးပြီး တရုတ် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရ နေပူလောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ပျက်ဆီးခြင်းတွေကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပါတယ် ။ ပုလဲ ပေါင်ဒါအမှုန့်မှာအမိုင်နိုအက်ဆစ် ၂၀ မှ ၂၂ မျိုးထိပါဝင်ပါတယ် ။ သဘာဝ Moisturizer ပါဝင်ပြီး ပရိုတိန်းတွေက အရေပြားဆဲလ်အသစ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် ။ ဗီတာမင်ဘီ အုပ်စုဝင်တွေနဲ့ poly[saccharides တွေက ကြွက်သားတွေကို သန်မာစေပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ပုလဲအမှုန့်ဟာ ကယ်လ်စီယမ်တွေရဲ့ ဇစ်မြစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် ။
(Living Life Journal Cover Story - Special Issue)
သက်တန့်ချို (ဆေး ၂ ) ရေးသားသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများကို
လစဉ်ထုတ် Health For All Magazine ၊ အပတ်စဉ်ထုတ် Living Life Journal နှင့် Health Care Journal တို့တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 11:05 AM5comments:
ဒီတစ်ခါတော့ အံသြဖွယ်ရာ သန္ဓေသားလောင်း တိရိစ္ဆာန်လေးများကို ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက စုစည်းပေး လိုက်ပြန် ပါပြီ။ ဒီသန္ဓေသားလောင်းတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ ကြီးလာရင် ဘယ်လို သတ္တ၀ါမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းကြည့်ကြပါစို့လား ။
Posted by သက်တန့်ချို at 10:48 AM5comments:
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ပုံမှန်မဟုတ်သော မံမီ ရုပ်အလောင်းများ
Paru မှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိသော မိန်းကလေး မံမီရုပ်အလောင်း
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်မမှန်တော့တဲ့ မံမီ ရုပ်အလောင်းတွေကို ဆင်ဟွာ သတင်းဌာနက ယခုလို စု စည်းဖော် ပြပေးခဲ့ပါတယ် ။ ကြောက်တတ်သူများမကြည့်ရ ။
Llullaillaco Volcano မှ ကလေးမံမီရုပ်အလောင်း
အမေဇုံ မိုးသစ်တောထဲမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိသော မံမီရုပ်အလောင်း
ဘုရင် Ramesses ၏ ရုပ်အလောင်း
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၃၀၀ ခန့်က အသတ်ခံရပြီး မြှုပ်နှံခံရသော ယောင်္ကျား မံမီရုပ်အလောင်း
နီညိုရောင်ဆံပင်နှင့် ဥရောပ မြောက်ပိုင်းမှ မံမီရုပ်အလောင်း
Posted by သက်တန့်ချို at 9:54 AM5comments:
Labels: ထူးဆန်းသောသတင်းများ, ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ, အံသြဖွယ်ရာ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု
နေရာလွဲမှား သားအိမ်အတွင်းသား ရောဂါ (Endometriosis)